Keys Cafe by Good Lock dia mampiavaka ny fitendry Samsung anao toy ny tsy nisy teo aloha | Androidsis
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android, Ataovy miavaka ny Android, Samsung
Misaotra an'i Keys Cafe hahafahantsika manamboatra tanteraka ny Samsung Keyboard amin'ny Galaxy Note10 + anay. Iray amin'ireo fampiharana Good Lock mahatalanjona, ary efa nampianarinay anao ny fomba hanamboarana ny menio zaraina, ary izay azon'ny rehetra manana Galaxy manana One UI 2.5 na avo kokoa.
Ity fampiharana ity Azo alaina ao amin'ny Galaxy Store ary hanome antsika ny fahaizana manome karazana tandindona, emojis na fiasa mihitsy aza amin'ny lakile rehetra, na koa manampy pejy vaovao hamenoana azy ireo amin'ny teny na andian-teny nataonay. Andao ataontsika izany ary aza hadino ny horonantsary izay anehoanay anao ny tsiambaratelo rehetra amin'ny fanaingoana ny fitendry Samsung.
Keys Cafe ao amin'ny Galaxy Store
Ity fampiharana ity dia natomboka herinandro lasa izay tao amin'ny Galaxy Store ary azo alaina ho an'ny Galaxy rehetra izany manana kinova 2.5 an'ny UI iray amin'ny findainy.
Miorina amin'ny fizarana telo izy io: Mamorona fitendry anao manokana, manaingo ny fitendry anao sy lalao roa. Tokony holazaina fa amin'izao fotoana izao dia tsy amin'ny Espaniôla izy io, fa amin'ny teny anglisy dia efa mamela antsika hiditra mora foana amin'ny safidiny rehetra.
Ny fizarana voalohany dia mamela antsika ovao ny lakile rehetra amin'ny modely azontsika atao ny mamorona azy hitahiry azy na mamorona iray hafa ho an'ny karazana fitsapana rehetra. Tsindrio ilay tonga amin'ny toerana misy anao ary rehefa manamboatra azy izahay dia mankany amin'ny interface customization.
Any an-tampony isika rehetra marika, taratasy, fiasa, emojis ary maro hafa hanomezana ny môdely fitendry izay ananantsika eo ambany. Eto ny marina dia tena be dia be ny katalaoginy mba hananana marika an-jatony hanatevin-daharana ny fitendry.
Ao amin'ny faritra ambany fotsiny dia tsindrio ny bokotra iray ary isika mamela anao hanova ny haavony sy ny sakany ary koa ny fanomezana ireo famantarana, sary masina sy maro hafa. Karazana hatsaran-toetra isan-karazany mba hahatonga ny fitendry hataontsika ho lasa personalized tanteraka.
manavaka mamela ny manampy pejy ka ankoatr'izay misy famantarana manokana, azontsika atao ny manamboatra ny iray manontolo miaraka amin'ny emojis na izay tiantsika.
Farany manana ny safidy hanamboarana ny loko fitendry hamorona ny lohahevitrao manokana, na dia tsy maintsy mametraka Theme Park amin'ny Good Lock (ary amin'ny fomba Pentastic hanamboarana ny S Pen of the Note mba hahagaga antsika). Manana fizarana hafa ihany koa izahay momba ny vokatra vokarina rehefa manindry ny fanalahidy izahay ary raha te-hisalasala izahay alohan'ny mpiara-miasa dia safidy manokana mahavariana.
Azonao atao izany ampanjifaina tanteraka ny Samsung Keyboard mamela ny fifaninanana amin'ny dragona, satria tsy misy mitovy amin'ny haavon'ny kalitaon'ny zavatra rehetra atolotry ny kitendry ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hanamboarana tanteraka ny Samsung Keyboard
Ahoana ny fampiasana ny kinova amin'ny Facebook amin'ny findainao na ny takelaka
Samsung Galaxy M31s dia nahazo fanavaozana One UI 2.5